Somaliland: Guurtida Oo Dhaliishay Siyaasada Xukuumadda Ee Beeraha Iyo Dibindaabyada WFP - #1Araweelo News Network
Somaliland: Guurtida Oo Dhaliishay Siyaasada Xukuumadda Ee Beeraha Iyo Dibindaabyada WFP
“Wasaaradda Beeruhu waxay ku mashuusantahay oo keliya Shahaado , Ganacsatadu Ma aaminin in ay dalkooda Maalgashi ku sameeyaan” Suldaan Ismaaciil Xildhibaan Guurtida ah.
Hargeysa(ANN)-Gollaha Guurtida Somaliland, ayaa qaadaa dhigay dhibaatooyinka haysta Beeralayda dalka iyo sababta ay wax-soo-saarka dalaga Beeruhu diciifka u yihiin.
Kalfadhiga 77aad ee gollaha, ayaa lagu soo daray ajandaha arrimaha dhaqaalaha dalka iyo wax-soo-saarka, waxaana doodda oo mudanaayal door ah ka qaybgaleen lagaga hadlay dooddo la xidhiidha arrimahaa.
Muddanayaasha, ayaa qodobka siddeedaad oo si gaar ah loogu faaqiday sababta hortaagan tabbaca Beeraha, waxaana si weyn loogu dhaliilay doodda doorka xukuumadda Somaliland ee wacyigelinta iyo cuntada waddaniga ah.
Dhinaca kale, waxa mawduuca doodda lagu dhaliilay qaabka ay Hay’adda qaramada Midoobay u qaabilsan Cuntada ee (WFP), ula macaamisho Bulshada, waxaana lagu eeddeeyay in xilliga dallaga Beeralayda ay kusoo beegto raashin ay dalka soo geliso.
Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan, oo ka mid ah Xildhibanada ka qaybqaatay doodda, ayaa ganacsatada dalka ku dhaliilay, sidoo kale, wuxuu sheegay in Wasaaradda Beeruhu ka gaabisay shaqadeeda, isla markaana ku mashquushay in ay bixiso Shahaado, iyadoo aan eegayn waxa laga soo saaray Beerta.
Sidoo kale, Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan, wuxuu sheegay in aannay jirin siyaasaq qaran oo ku waajahan wax-soo-saarka dalka, isagoo xusay in dhaliillaha arrimahaa aannay ka baxsanayn wasaaradda waxbarashadu.